“Mudane Madaxweyne, dalka fawdo ha gelin…” Guddoomiyaha Waddani – WARSOOR
HARGEYSA – (WARSOOR) – Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa ku eedeeyey Madaxweyne Muuse inuu ku tumanayo sharcigii waddanka u yaalay, isaga oo sheegay in Madaxweynuhu doonistiisa shakhsiga ah uu ka door biday distuurkii iyo sharcigii dalka.
Qoraal uu Guddoomiyuhu ku baahiyey bartiisa facebook, ayaa ku yidhi “Madaxweynuhu waxa uu ku tumanayaa sharcigii iyo dastuurkii ummaddu ku heshiisay, ee isaga laga doonayey inuu ilaaliyo oo uu dhawro. Hadalkiisii shalay iyo kii uu u soo dhiibay Wasiirkiisa Warfaafinta, labaduba waxa ay daliil u yihiin in Madaxweynuhu meel iska saaray sharcigii dalka ee uu Madaxweynaha ku ahaa, isaga oo doonistiisa shakhsiga ahvka doorbiday ilaalinta sharciga dalka.
Madaxweynuhu sida aynu ognahay wuxuu ku ololeeyey sarreynta sharciga, balse 4 sano oo uu joogay waxa uu caado ka dhigtay ku tumashada sharciga iyo faro-gelinta Haayadaha dastuuriga ah ee Dalka.
Madaxweynuhu waxa uu farriin faro-gelin qaawan ku ah Golaha Wakiillada u soo dhiibay Wasiirkiisa Warfaafinta, kaas oo warbaahinta si cad uga sheegay isaga oo ku hadlaya afka Madaxweynaha inuu dhaqangal yahay wax-ka-beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka Ururrada siyaasadda iyo ansixinta Axsaabta qaranka oo Golaha Wakiillada hor yaalla, taasina waxa ay ka soo horjeeddaa qodobka 37aad ee dastuurka Somaliland oo caddaynaya kala madax-bannaanaanta haayadaha Qaranka.
Haddana, Madaxweynuhu waxa uu mar kale ka hadlay Xeer 14, oo weli hor yaalla Golaha Wakiillada, isaga oo sheegay inuu isagu saxeexay Xeerkaasi, balse Golaha Wakiillada waxa hor yaalla Xeerka uu Madaxweynuhu leeyahay waan saxeexay oo uu isagu ku soo celiyey Golahaasi, isaga oo soo raaciyey soojeedin la xidhiidha in ay wax ka beddelaan qodob Xeerkaasi ku jira oo Dastuurka ka hor imanaya. Haddaba, waa yaabe ma laba Madaxwayne ayaa dalka ka jira? Mid xeerka saxeexay iyo mid Golaha Wakiillada ku soo celiyey!
Markaa Madaxweynuhu waxa uu u muuqdaa inuu ku dawakhay hoggaamintii dalka, taladii sharci-yaqaannadana aanu qaadanayn.
Mudane Madaxweyne, dalka fawdo ha gelin, inaad xeerkii ku hor yaallay aad Golaha Wakiillada ku soo celisaa waa awood aad leedahay, hase yeeshee inaad ka daba timaaddo awood uma lihide waa fawdo, waa jaah-wareer kaa muuqda inaanad fahamsanayn xeerarka iyo dastuurka ama aanad dan ka lahayn.
Madaxwayne, shacbdigan sicir-bararka iyo abaaruhu ku habsadeen ayaa ku sugaye e, intaad yooyootanka ka baxdo dadkaaga u shaqee, doorasho Madaxwayne na ka shaqee, haddii aad fawdo ku sii socoto dalkani halis buu gelayaa ee masuuliyadda fawdadaas ka dhalata u diyaar garow.”
Guddoomiyaha Xisbiga Waddani, Xirsi Cali Xaaji Xasan